gv-2015 · Global Voices teny Malagasy
Tantara mikasika ny gv-2015
Mediam-bahoaka13 Desambra 2019
Ny 31 Martsa 2015 no natao tao Mozambika, ary natrehan'i Borges Nhamirre, mpanao gazety sy mpikaroka ao amin'ny Center for Public Integrityny adihevitra momba ny fanaovangazety amin'ny finday
Mampahafantatra ny Visual Storytelling
Mediam-bahoaka14 Septambra 2019
Iray amin'ireo fivoriana tamin'ny fihaonan'ny Fiarahamonina Global Voices nankafiziko indrindra ny resadresaka momba ny fitantarana tantara hita maso avy amin'ny tale mpanatanteraka ao amin'ny GV, Ivan Sigal. Nijery ny fomba ahafahana mampitombo ny teknolojiam-baovao sy ny fifandraisana ary ny sehatra an-tserasera mba hampiseho tantara amin'ny fomba vaovao ny fifanakalozan-kevitra.
Juan Tadeo: Miatrika ny fahaketrahana taorian'ny fihaonambe
Mediam-bahoaka12 Septambra 2019
Ho an'ireo namana GV izay mety mamaky ireo teny ireo, avelao aho hilaza hoe: tombontsoa ity, mahafinaritra ianareo, ianareo tsirairay avy ary tsy andriko ny hiara-hiasa akaiky aminareo mba hahatonga ny tontolon'ny bilaogy sy ny aterineto ho toerana tsara kokoa. Antenaina fa hifankahita tsy ho ela isika.
Laura Schneider: Tsy mora mihitsy ny niverina nody
Mediam-bahoaka10 Septambra 2019
Vao avy nanoratra lahatsoratra tao amin'ny bilaogiko momba ny fihaonana an-tampon'ny GV aho ary nandrisika ahy i Marianna Breytman mba handefa izany eto. Saingy fampahalalana ankapobeny ho an'ireo tsy mahalala momba ny GV, sy izay nataontsika tany Filipina izany ary iza no mahalala, mety afaka manampy hahazo mpanoratra vaovao aho.